अनौपचारिक | गणेश कार्कीको ब्लग
आज बन्द, आउँनुहोस् घुमघाम गरौं
Posted on April 27, 2011 by नेपाली मुटु
आज बन्द भएर के भयो, आउँनुहोस् मनकामना माताको दर्शन गर्न जाऔं ।
गोरखामा अवश्थित मनकामनामा देवीको मन्दिर पारिवारिक यात्राका क्रममा भर्खर पुग्ने अवसर मिल्यो । बाटो देखि नै देखिएको श्रदालुको भिडले मनकामना देवी प्रती मानिसहरुको आस्था बुझ्न अफ्ठ्यारो थिएन । वास्तवमा मनकामना श्रदा र आस्थाका लागि मात्र नभएर भ्रमणका लागि पनि उत्तम विकल्पका रुपमा रहिआएको छ । काठमाण्डौंबाट एकैदिनमा भ्रमण सकेर आइपुगिने भएकाले पनि यसको महत्व बढेको हो । काठमाण्डौबाट सुलभ मुल्यमा आतेजाते बस या माइक्रोबसको टिकट र मनकामनाको टिकट पाईने भएकाले यो यात्रालाई सरल रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालको एकमात्र केबलकार भएको मनकामनामा आन्तरिक पर्यटनको बढावा गराउँने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ । तर जुन आस्था र रोमाञ्चकताको अनुभव गर्दै त्यहाँ पुगिन्छ, त्यहाँ पुगे पछि केहि खल्लोपनले भने अवश्य टोक्ने गर्छ ।
नेपालको पहिलो र एकमात्र केबलकार भएको कारण मात्र नभएर यसले १० मिनेटको छोटो अबधीमा पार गर्ने खोला, पहरा र डाँडाको कारण पनि मानिसमा यसले रोमाञ्चकता भरिदिन सक्छ । पहिलो पटक केबलकार चढ्नेहरुका लागि यसको रोमाञ्चकता त झन् भनिनसक्नुको हुन्छ ।
केबलकारबाट देखिने सानो गाउँले पनि भिन्न नेपालको अनुभव गराउँछ ।
केबलकारबाट उकालो चढ्दै गर्दा देखिने तल्लो बेस स्टेशनको दृष्य पनि उस्तै लोभलाग्दो हुन्छ ।
डाँडामा एकै छिनको पैदल यात्राबाट पुगिने मनकामना मन्दिरको कलात्मकतामा पनि प्राचिन नेपाली कलाको झझल्को मिल्दछ । जुनसुकै समयमा पुग्दा पनि केहिबेर लाईनमा बस्नै पर्ने मनकामनाको अर्को बिशेषता हो । भक्तहरुको हुलमा जो सुकै भित्र पनि आस्तिकता उम्रन्छ ।
तपाईले क्यामेरा लान बिर्षनु भयो अथवा पाउँनु भएन भने पनि चिन्ता लिनु पर्दैन । तपाईको तस्विर खिच्नलाई त्यहाँ फोटोग्राफरहरु घाँटीमा क्यामेरा भिरेर तछाडमछाड गर्दै तपाईलाई बोलाउँनेछन् । सस्तोदरमा तपाईले मनकामनाको सम्झना स्वरुप फ्रेमिङ गरिएको फोटोहरु तुरुन्तै लान पाउँनुहुनेछ ।
मनकामनामा दिनहुँ जसो नै परेवा, कुखुरा, बोका आदिको बली दिइने गरिन्छ । तर बलि दिने स्थानमा नियमित सफाई नहुनाले लाईनमा बसेका भक्तलाई निकै समस्या पार्ने गर्छ । त्यहाँबाट आउँने गन्धले केहि छिनमै टाउको दुख्न थाल्छ ।
मनकामनामा भाकल पछि छाडिने परेवाको स्थिती पनि एकदम नाजुक रहेको पाएँ । मन्दिर छेउमा बिरामी अबश्थामा रहेका परेवा यत्रतत्र थिए भने मरे पनि त्यसै छाडिएका परेवाको संख्या पनि कम थिएन । मन्दिर परिसरमा नै भाकलमा चढाइएका परेवाको यस्तो स्थिती पक्कै पनि मन दुखाउँने खालको छ ।
तपाई यदि मनकामना पुग्नु भएको छैन भने अवश्य जानुहोला । यात्रा सजिलो छ ।
जय मनकामना माता
Filed under: अनौपचारिक |	3 Comments »
फेरि जन्मदा साइबाबा यस्ता हुन्छन् रे
साइबाबाको जीवनकाल विवादै विवादमा सुखसयलका साथ बित्यो । उनका जति विवाद बाहिर आए पनि उनका भक्तलाई त्यसले कुनै प्रभाव पार्न सकेन । उनले आफ्नो आयू ९६ बर्ष सम्म बताए पनि उनले ८५ बर्षको उमेरमा नै संसार छाडे । तर पनि उनका भक्तलाई यो भविष्यवाणी पुरा नभए पनि उनी प्रति शंका उत्पन्न भएको छैन । उनीहरु अब साइबाबाको अर्को जन्मको पखाईमा पो छन् बरु । साइबाबाले नै घोषणा गरेका थिए उनी फेरि जन्मिनेछन्, प्रेमसाइको रुपमा । यतिसम्म कि उनको आज्ञा अनुसार बनाइएको भनेर भविष्यमा जन्मने प्रेमसाईको फोटो पनि सार्वजनिक भइसकेको छ (फोटो हेर्नुहोस् ।) । सत्यसाईका अनुसार प्रेमसाइ यस्ता हुन्छन् रे ।
पहिलोपटक साइबाबाले सन् १९६३ मा प्रेमसाइको बारेमा बताएका थिए । उनले एकदिन गुरु पुर्णिमाको दिन बताए अनुसार उनी शिव र शक्ति दुबैको मिश्रित रुप हुन् रे भने यसअघिका शिरडी साइबाबा शिवका मात्र रुप थिए रे । अब पालो फेरि शक्ति एक्लैको परेकोले अब जन्मने साइ शक्तिमात्रको अवतार हुनेछन् रे । उनको जन्म सन् २०२३ मा साइबाबाको मृत्युको एकबर्ष पछि बैंग्लोरको छेउछाउमा हुने बताएका थिए । प्रेमसाइको मृत्यु ९३ बर्षमा सन् २११६ मा हुने पनि भविष्यवाणी गरेका छन् ।
त्यसपछि सन् १९९० मा बिद्यार्थीहरुसँग कुरा गर्दै सत्यसाइले उनको पुनर्जन्म प्रेमसाइका बाबुको जन्म भारतको दक्षिणी राज्य कर्नाटकमा भइसकेको बताएका थिए । त्यससँगै उनले प्रेमसाइको आमाको बारेमा पनि बताएका थिए । उनका अनुसार प्रेमसाइका आमाको पनि यो पुनजन्म भइसकेको र उनको नाम प्रो. कस्थुरी हुने पनि बताएका थिए । उमेर भए पछि प्रेमसाइले विवाह गरि एक पुत्र जन्माउँने पनि उनले घोषणा गरेका थिए ।
साइबाबाले दिएको अलौकिक ज्ञानको माध्यमबाट उनका अनन्य भक्त जोह्न हिस्लोपले प्रेमसाइको फोटो तयार पारेका हुन् । साइका भक्तहरु यसलाई प्रेमसाइका रुपमा पुज्ने गर्छन् ।
यसरी साइबाबाले आफ्नो जीवन मात्र रहस्यपुर्ण बनाएनन्, आफ्नो मृत्यु पछाडी अर्को कुनै व्यक्तिलाई पनि सो रहस्य कायम गराइराख्न बाटो बनाइदिएका छन् । अब भविष्यमा कुनै भारतियले आफुलाई प्रेमसाइका रुपमा प्रस्तुत गर्न सहजबाटो खुलेको छ । उनका भक्तहरु साइबाबाका सबै चमत्कारलाई दैवी कृपा मानिरहका छन् नै, अब उनको भविष्यवाणीको समय पर्खन कुनै अफ्ठ्यारो हुने छैन । उनीहरुले सहजै त्यसलाई विश्वास गर्न पनि सक्छन् । तर आफ्नै उमेरका सम्बन्धमा असफल भएको उनको भविष्यवाणी पछि साइबाबाले भ्रममात्र पैदा गरेका थिए र उनका सबै भविष्यवाणी तिनै भ्रमका श्रृखंला मात्र थिए भन्न गैरभक्तहरुलाई पनि सहज नै हुनेछ ।
Filed under: अनौपचारिक, अलगधार |	4 Comments »
पशुपतिमा एक बिहान
Posted on April 19, 2010 by नेपाली मुटु
उनको नाम मनमाया र उमेर ६५ बर्ष भयो रे । उनको घर सुन्दरीजल तिर भन्थिन् । शनिबार र सोमबार पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जादैहुनुहुन्छ भने गेट छेउको देब्रे कुनामा याद गर्नुहोस्, उही मनमाया तपाइलाई चप्पल जुत्ता फुकालेर जान भन्दै हुन्छिन् । तपाईले जुत्ता चप्पल राख्ने बेलामा एक पटक सोध्नुहोला, “जुत्ता चप्पल राखेको कति दिनु ?” हासोको फोहोरा छोड्दै उनी भन्छिन्, “दिनुहोस् न, हजार बा¥ह सय ।” अब हास्नु भन्दा अर्काे बिकल्प तपाइसँग कहाँ रहन्छ र ? मैले उनलाई सँधै यही यसरी नै बस्नुहुन्छ भनेर सोधें, उनले जवाफ दिइन्, “शनिबार र सोमबार चैं सँधै नै बस्छु ।” अरु दिन उनी पसल गर्छिन् रे । के को पसल गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिदै उनले भनिन्, “तपाइ जस्ता तन्नेरीलाई एक छाक हुने आलु र अलिकति खोर्सानी र थोरै मुठ्ठा साग ।”
बाँच्न जानेकी एक बुढ़ी आमै
उनी सँधै जसो हासीरहन्थिन् । केहि रमाइला कुरा गरेर छेउमा बस्नेको ढाडमा प्याट्ट हिर्काउँथिन् ।
जीवन जसरी पनि बाँच्न सकिन्छ । जीवन कस्तो बाँच्ने त्यो तपाईको हातमा हुन्छ । धेरै सपनाहरुले जीन्दगी नै बोझिलो बनाउँछन् कहिलेकाँही । ति बुढि आमैसँग एकदिनको सपना छ, अर्कोदिनलाई सपना देख्न अर्काे दिन नै छदै छ नि । उनले यस्तै भनिन् । सायद जीवनले उनलाई पढाएको पाठ होला यो । उनीसँग केहि छैन तर पनि उनी खुसी छिन्, । यसलाई नै बाँच्ने कला भनिन्छ होला । उनलाई देखेर भन्न सकिन्छ खुसी भएर बाँच्न त्यती गा¥हो रहेनछ । खुसी जे मा पनि हुन सकिदो रहेछ । मात्र एकपटक मनलाई बाँधेर हेर्ने हो भने जे सुकैमा खुुसी हुदोरहेछ । साँच्चै नै खुसी हुन कत्ति पनि गा¥हो छैन । आफ्नो हातको अन्न परेवाले खाएको हेरेर पनि खुसी हुन सकिन्छ । चारो टिपीरहेका परेवा केटाकेटी उडाएर मज्जा लिएको देख्नु भएको छ ? हामी त्यस्तो किन गर्न सक्दैनौं ? पशुपतिको एक बिहानले धेरै पाठ पढायो मलाई । अनि मैले सोचे हाम्रो सोचाइमा कमजोरी छ । खुसी हुनलाई कारण पर्खिने हाम्रो सोचाइले नै हामी दुखी छौ । धेरै ठुला सपनाहरुले खुसीहरुलाई किल्चिदो रहेछ र, आफ्नै आँखा अगाडिको खुसी नदेखेर हामी भौतारिदो रहेछौ ।
परेवा खेदाएर खुसी हुदै एक बालक
हामी सबै यस्तै सोच्छौ कि बिबाह पछि खुसी मिल्छ । यसैले बिबाह अगाडिका हरेक पललाई हामी निरर्थक बनाउँछौ । लुगा धुनु, खाना पकाउनु, एक्लै साँझमा घुम्न निस्कनु यी सबै कुरालाई हामी खाली काम र समय कटाउँने उपायका रुपमा परिभाषित गर्छाै र, कोठा फर्किदा थकित भएर फर्किन्छौ । अबिबाहित समय यसरी नै बित्छ । जब बिहे हुन्छ तब पनि केहि दिन पछाडि पुन जिन्दगीसँग गुनासो गर्न थाल्छौ र, सोच्छौ छोराछोरी भए पछि सुख हुन्छ । छोराछोरीको बोझ सम्झेर फेरि सोच्छौ यी ठुला भए पछि सुख मिल्छ । छोराछोरी ठुला हुन्छन् र सपनाको बोझले तिनीहरु पनि कताकता लाग्छन् र फेरि हामी निराश हुन्छौ । अनि जीवन कति नै लामो छ र ? सुखभोग गर्ने लालच लिएरै हामी संसारबाट बिदा हुन्छौं ।
आखिर जीन्दगी सपना बोकेरै बाँच्नु छ भने भोलीका लागि किन आज सपना बोकेर आज बेकारको बनाउँने ? बुढि आमैले भने जस्तै गरि भोलीका लागि भोली नै सपना देखौ न ।